မြိုမင်းဆက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤarticle သည် အထူးသိကျွမ်းနားလည်သူ၏ ဂရုစိုက်ရေးသားမှုကို လိုအပ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းပြချက် တစ်ခု သို့မဟုတ် "talk" ပါရာမီတာကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စရပ်ကို ရှင်းပြပေးပါ။
ဤဖော်ပြသော မြို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်(ယခင်) ယခု အနည်းငယ် ၊ရခိုင်ပြည်နယ် (တိုင်းဒေသ) မောင်တော ၊ ဘူးသီးတောင် ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော် ယိုးချောင်းဖျား ၊ အန္ဒိယနိုင်ငံ မနိပူရ (Manipur)၊ အာသံ(assam)၊ ထရီပူရ (Taripura) ပြည်နယ် နှင့် ဘင်္ဂလာ ဒေ့ရှ် နိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်ကြား (Chittagong Hill Tracks= CHT) ဒေသများ အတွင်း ယနေ့တိုင် နေထိုင် လျှက် ရှိကြ ပါသည်။ ဤလူမျိုး များထဲမှ မြို ၊ မရူ စသည် တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ၁၃၅ မျိုးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ စာရင်း ထဲမှာ ပါဝင် ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ မရူ=Mru တို့ မှာ မြို (မရို)=Mro နှင့် မူရောင်= Murong ဟုလည်း ကောင်း ၊ မရိုစာ Mroo-tsa= မြိုစာ Mro-cha ဟုလည်းကောင်း ခေါ်တွင်၏။ ချတ်ကမာ (Chakmas ) နှင့် မရမ္မ ာ=Marmas (မြန်မာတို့) က သူတို့ကို လင်ဂ်တာ(Lengta), ကူကီ(Kuki ) သို့မဟုတ် လင်ေ၈ျး ( Langye) သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်း လူရိုင်းများ ဟုခေါ်ကြပါသည်။ မြေပြန့်သားများကမူ မူရောင် များ= Murongs ဟူ ၍ ခေါ်ကြပါသည်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကောက်နှုတ်ချက် ကို ရှုပါ။ Mru are also Known as Mro and Murong. Chakmas and Marmas call them Lengta, Kuki or Langye or wild/primitive people while some people of the plains designate them as Murongs.(Ref: SAIFEE p3) မြို ၊ မရူ သည် အယူသီး ရှေးကျလှသော အယူအဆများကို ကိုင် စွဲထားကြ သည့် အတွက် လွန်စွာမှ ပင် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ကြပါသည်။ အင်တာနက်တွင် တွေ့ရသော ဘင်္ဂလာ ဒေ့ရှ် နိုင်ငံ သုတေသီများ ၏ သုတေသနစာတန်း အရ စစ်တကောင်း တောင်ကြား (Chittagong Hill Tracks= SHT) တွင် မရူ လူဦးရေ မှာ ၁၉၅၆ က ၁၇၀၀၀ နှင့် ၁၉၈၁ တွင် ၂၀၀၀၀ မျှသာ ရှိသည် ဆို၏။ The Mru population in Chittagong Hill Tracts in 1956 was 17000 and in 1981, it stood at 20,000. ဤ ရှေးကျသော လူမျိုး အလျောက် ခေါ်ဝေါ်မှု အမျိုးမျိုး နှင့် ရေးသားသော်လည်း မြို လူမျိုးကိုပင် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူရပါသည်။ ဤလူမျိုးတို့၏ သမိုင်း မှတ်တမ်းများ က ဖော်ပြသော မင်းဆက်များ ကို ဖော်ပြပါမည်။
၁ အမတ်ကြီး ဓမ္မဇေယျ နှင့် သားတော် သုံးပါး
၂ မြို မင်း အမြတူ ၊ အမြကူ နှင့် မြို မင်း ပဲဖြူ
၃ စည်သဘင်အမတ်ကြီး မြို မင်းနှင့်သမီး ပန်းနီလာ
အမတ်ကြီး ဓမ္မဇေယျ နှင့် သားတော် သုံးပါးပြင်ဆင်
ရခိုင်သမိုင်းရာဇဝင် စာအုပ်များ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတို့တွင် ဖော်ပြသည့် မြို မင်း ဆက်များကိုဤကဲ့သို့တွေ့ရပါသည်။ပထမ- ဓညဝတီ မရာယုမင်းဆက်( ၆၂)ဖော်ပြထားသည့်အနက်မှ (အမတ် မြို ၃ ဦးသည် (အာရကန် သက္ကရာဇ် ၆၆၀၁-၆၆၀၂ခရစ်တော်မပေါ်မှီ သက္ကရာဇ် ၂၇၁၉-၂၇၁၈နန့်စံနှစ် ) အမတ်ကြီး ဖခင် ဓမ္မဇေယျသားတော်အကြီး မဏိဒတ္တအမည်ရှိ၊နှင့်သားအငယ် သင်္ခအမည်ဟု၍ ဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်ဝေသာလီကျောက်လှေကားမြို့တော်တွင်စူဋစန္ဒြားမင်းစိုးစံနေလေသည်။မင်းသည်ဦးရင်းနာ(ဦးရစ်နာ၊ဦးခေါင်းခဲ့နာ)စွဲကပ်နေလေသည်။ထိုဦးရစ်နာရောဂါကြောင့်ဟူးရာတတ်တို့အကြံပြုချက်အရ (ပဉ္စလရစ်)သင်းတွဲပြည်သို့လှေဖောင်တော်ဖြင့် ကြွချီခဲ့လေသည်။ အပြန်တွင် မော်တင် နဂရစ်ပင်လယ်ဝဲ၌ ဖောင်နှင့်တကွ ရေနစ်ကာ နတ်ရွာစံတော်မူသွားခဲ့ရလေသည်။ဘုရင်မင်းမြတ်လှေဖောင်ပျက်၍ နတ်ရွာစံလွန်တော်မူလေသော်ထိုမင်း၏ အမတ်ကြီး ဓမ္မဇေယျ နှင့်စစ်သူကြီးဗလဒေဝစသော ဗိုလ်ခြေတစ်ထောင်တို့မှာအသက်ဘေးမှ လွတ်ခဲ့ရလေ၏။ အသက်မသေဘဲ ပြန်ရောက်လာကြသူများသည် ဝေသာလီမြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်။ထို့အခါစန္ဒာဒေဝိမိဘုရားက ငါ့လင်ကိုသတ်၍ မင်းပြုရန်လာသည်တကားဟုဆိုကာ ရန်းဝက တားလင့်လေ၏။ရမ်းတားသည်ကြောင့်ရန်းဝဟုတွင်ခဲ်ရသည်။
မိဘုရား၏အထင်မှားခြင်းကိုခံကြသူများသည် ထိုမှပြန်လှည့်ထွက်ခဲ့ကြကာကစၦပနဒီမြစ်အတိုင်း ဆန်တက်သွားခဲ့ကြလေသည်။မြို့ တော်နှင့်ဝေးလောက်ရာ ကူဝတော၌ နေကြအံ့ဟုရပ်တန် နေခဲ့ကြလေ၏။ ထိုနေရာတွင် မနေကြရန် မိဖုရားက လိုက်၍ နှင်ပြန်လေသည်။ ထိုကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်း၌ မနေသော၍ ကင်းလွတ်ရာ ဌာနသို့ ရှောင်ခဲ့ကြရလေသည်။မိဖုရားအား ပုန်ကန်မူမပြု ကြချေဘဲနေခဲ့ကြသဖြင့် ထိုနေရာကို မထရစ်ဟူ၍ တွင်လေသည်။မဂဓလူမျိုးတို့၏ ဘာသာဖြင့် ဥတရာဇ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြလေသည်။အမတ်ကြီး၏ ဗိုလ်ပါသင်းပင်းများသည် လွန်စွာများပြားကြလေသည်။ထို့ကြောင့်ယူဇနာသုံးဆယ်မကဝေးသော အရပ်သို့တိုင်အောင်ပျံ့နှံ့လျက်နေထိုင်ကြလေ၏။၎င်းတို့သည် တိုင်းပြည်တည်ထောင်၍ နေခဲ့ကြသည်ကိုသူပုန်မြို့
ဟူ၍ခေါ်ဆိုကြလေသည်။ဘင်္ဂလားပထဝီတွင်သီရိဟဇ်ဟူ၍ ပြဆိုထားပေ၏။ကုမ္ဗိလာခရိုင်အာသံပြည်နယ်စပ်တလျှောက်ဒေသများဖြစ်ကြ၏။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သောကိုလိုနီခေတ်အချိန်အခါက သီရိဟဇ်ခရိုင်ဟူ၍ သီးသန့်ခရိုင်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့လေ၏။အိန္ဒယနှင့်ပါကစ္စတန်တို့ နယ်မြေခွဲခြားမူဖြစ်လာသော အခါတွင်မှ နီးစပ်ရာခရိုင်အတွင်းသို့ပူးပေါင်းပါဝင်သွားခဲ့လေ၏။ အမတ်ကြီးဓမ္မဇေယျနှင့်အတူပါဝင်သွားကြသူများတွင် အတူတကွမလိုက်ပါဝ့ံဘဲနေရစ်ကြသူများလည်းရှိနေခဲ့ကြပေ၏။ကွဲကွာလျက်နေရစ်ခဲ့ကြသော လူပေါင်းငါးရာတို့သည် ခရီးအကြားတောမြူ ရာအရပ်တွင် တန့်ရပ်နေခဲ့ကြလေ၏။ထိုမြူ တော၌ပြည်ထောင်၍နေခဲ့ကြသောကြောင့် ထိုနေရာအား မြုံပြည်၊မြုံ မြို့ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြလေ၏။မဂဓဘာသာ၌ တောအရပ်ကို မူရဟုခေါ်လေ၏။မူရမှ မူရ်၊မြူ ၊မြုံ ၊မြို ဟုရွှေ့ပြောင်းပြောဆိုလာနိုင်လေသည်။ရခိုင်လူမျိုးတို့ဘာသာဖြင့် (တောမြုံ )(တောမြူ )ရာ၌တည်ထောင်ခဲ့သဖြင့် မြုံ ပြည်၊မြုံ ထောင်ဟုဖြစ်လာခဲ့လေသည်ဆို၏။ ထိုနေရာမှာ
ချောင်းသုးံခွဆိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။မဂဓလူမျိုးတို့ဘာသာဖြင့် တိ ံမြူ +တိပူရဟုခေါ်တွင်လေသည်။ယခု တရိပူရဟူသော မြုံ ပြည်ဒေသဌာနပင်ဖြစ်လေ၏။အမတ်ကြီး ဓမ္မဇေယျ
ကမိမိဆုအဖြစ်ရသောမြေလပ်ဒေသ တောတောင်အရပ်၌တည်ထောင်ရာဖြစ်၍ မြုံထောင်ဟုတွင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းအဆိုရှိခဲ့လေ၏။အမတ်ကြီးဓမ္မဇေယျသည် သားတော်နှစ်ပါးဖြစ်ထွန်းပါရှိခဲ့လေသည် သားကြီးဖြစ်သူမှာ မဏိဒတ္တအမည်ရှိပြီး သားငယ်မှာအာသင်္ခအမည်ရှိလေသည်။ထိုသားဘ သုးံယောက်တို့သည် ပြည်ထောင်သုးံခုကို ခွဲလျက်အုပ်ချုပ်ကာ နေလာခဲ့ကြလေသည်။ဖခင်ဓမ္မဇေယျ အုပ်ချုပ်သော ပြည်ကို မြုံ ပြည် ၊မြုံ ထောင်ဟု တွင်လေ၏။သားကြီး မဏိဒတ္တအုပ်ချုပ်သောပြည်ကို မဏိပူရထောင်ဟုခေါ်ခဲ့ကြလေ၏။ သားငယ်အာသင်္ခအုပ်ချုပ်ရာဌာနကို
ကားအသံထောင်ဟု အမည်ရှိလေသည်။ထိုသားအဘ သုးံဦးတို့ ပြည်ထောင် သုးံခု ခွဲခြားအုပ်ချုပ်သောကြောင့် တရိပူရပြည်ဟု မဂဓဘာသာဖြင့် ခေါ်တွင်လာလေသည်။ချောင်းသုးံခွဝယ် သုးံရွာတည်သောကြောင့်ကက္ကုလပြည်စားဟူ၍ ခေါ်တွင်လေသည်။စူဠစန္ဒြားမင်းလက်ထက်စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရန်မလိုဘဲ လက်ဆောင်ဆက်သခံဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သော နေရာများလည်းရှိလေ၏။ထိုနေရာများကို စစ်မထိုးကောင်းသောနေရာအရပ်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြ၏။နောင်အခါစစ်တကောင်းဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြလေ၏။ထိုစစ်တကောင်းအရပ်မှာလည်း နယ်မြေအထူးပြန့်လေကား အောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်ကို စစ်တကောင်းမြို့ဟု တည်ချပြီး မြို့စား၊ကျေးစားထားကာ အုပ်ချုပ်ကြလေသည်။ရီကြည်ချောင်းစား၊မရွိတ်ချောင်းစား၊ရီကြိုင်ချောင်းစားဟူ၍ အမည်ခံခဲကြလေသည်။ကံသာမြို့စား မတ်ကြီး မူှးကြီးများနှင့်ချောင်းစားတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြရာ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသကို ရီကြည်ကံသာတောင်၊ကံသာရီကြည်တောင်၊ရီကြိုင်ကံသာပြည်ဟူ၍ ခေါ်တွင်ခဲ့လေ၏။ဓမ္မဇေယျအမတ်နှင့် အတူလိုက်ပါလာခဲ့သော စစ်သူကြီး ဗလဒေဝ ဗိုလ်ပါသင်းပင်းများအုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ နယ်မြေဖြစ်သောကြောင့်လည်း ထိုဒေသကို ဗိုလ်မင်းထောင်ဟူ၍ ယခုတိုင် ခေါ်တွင်လျက်ရှိနေပေသည်။ကုလားတို့က မန္ဓရဘန်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြပေသည်။ထိုထောင်များ၌ နေထိုင်ခဲ့သောရခိုင်တို့သည်လူမျိုးခြားများနှင့်ကူးလူးဆက်သွယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းမရှိကြချေ ။မိမိတို့လူမျိုးဘာသာအလျောက်သာ ပေါင်းဖက်ဆက်ဆံနေလာခဲ့ကြလေသည်။ယင်းသို့ တသီးတခြားစီနေထိုင်လာခဲ့ကြသောကြောင့် လူမျိုးခြားတို့က မရမာဟူ၍
ခေါ်လာခဲ့ကြလေသည်။ထောင်သည်မော်ကွန်း၌ ကောဇာ ၁၀၈၆ခုနှစ်၌ စန္ဒဝိဇယဘုရင်သည်မရမာသားထောင်ခေါ် မရဖော်သားထောင်ကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့လေသည်ဟု မှတ်သားချက်
မြို မင်း အမြတူ ၊ အမြကူ နှင့် မြို မင်း ပဲဖြူပြင်ဆင်
ဝေသာလီ ကျောက်လှယ်ကားမြို့ဝယ် ကြွင်းကျန်ရစ်သော မှူးတော်မတ်တော်တို့နှင့်စန္ဒာဒေဝီမိဖုရားသည် တိုင်ပင်တော်မူကြလျှင်ဤပတ္တမြားလက်စွပ်သည် လက်ဝယ်တန်သောသူကို
မင်းပြုရစ်စေဟုမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမင်းကြီးတူဖြစ်သောစန္ဒကူးမင်းသားမင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့၏လက်၌ဝတ်စေသော်လည်းကောင်း၊အမတ်ကြီး၊စစ်သူကြီး၊ပြည်စို့၊ဘဏ္ဌာစိုး၊မြို့ကွပ်၊ကလန်သံပျင်တို့၏ လက်၌ဝတ်စေသော် လည်းကောင်း မတန်လေသော်ကြောင်းချောင်းဖျားမြောင်းဖျား တောတောင်အနံ့ှရှာကြလေသော် မီး၏အဖျား ၊သဟူချောင်းဖျား၌ အဆင်းအဝါ အစွမ်းခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသော
မြို သင်းကြီးညီနောင် သားအဖသုံးယောက်တို့သည် ကွန်စွန့်၍ တွေ့လေလျှင် လက်စွပ်ကိုဝတ်စေ၍ တန်လတ်သော် သုးံယောက်လုးံကိုဝေသာလီပြည်သို့ ဆောင်ယူခဲ့၍ ထိုမြို သုံးယောက်တွင် အစ်ကိုအမြတူကို စန္ဒဒေဝီမိဖုရားနှင့် သက္ကရာဇ် ၁၃၁ခုနှစ် တွင် မင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ကြလေသည်။ညီအမြကုကိုကား အိမ်ရှေ့အရာအပ်နှင်းပေ၏။သားပဲဖြူ ကိုကား မြောက်ဥဟူသော ရွာကို
နှင်းပေ၏။ကျက်သရေတောင်ထက်ဝယ်ပျဉ်တိုင်အိမ်ဆောက်၍နေလေ၏။ထိုအခါ၌ နတ်လှံရှင် လက်နက်သည် စူဋစန္ဒရားမင်းဝယ်ပါလေသောကြောင်း တိုင်းနိုင်ငံသည် ရှေ့မင်းတို့
စိုးစံတော်မူသောအခါကဲသို့ မဖြစ်လေ။တိုင်းပြည်၌ကား ဝပြောသာယာစည်ပင်စွာရှိ၏။ ထိုမြို မင်း အမြတူ မင်းပြု၍ ခြောက်နှစ်ရှိလတ်သော် မိဖုရားစန္ဒဒေဝီသည် လင်ဖြစ်သူအမြတူမင်းကို ထက် မတ်ဖြစ်သော အိမ်ရှေ့မင်း အမြကူသည် အရောင်အဆင်းအရည်အသွေးခီန်အားလက်ရုးံနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်တပ်မက်ခြင်းဖြစ်၍ မှားယွင်းလွန်ကျူးကြလေလျှင် လင်အမြတူမင်းကိုပယ်လျက် မတ်အမြကူအိမ်ရှေ့မင်းနှင့်မင်းပြု အ့ံဟု ကြံသောအဖြစ်ကို မြို သင်းကြီး အမြတူသိလေသော်မိဖုရားနှင့်ငါ့ညီတို့ အကြံထက် ငါလျင်အောင်ကြံရစေဟု တစ်သောအခါဝယ် ညဥ့်သန်းခေါင်
အချိန်၌ ယောင်ယမ်း တွံပြု ၏။မိဖုရားလည်းအကြောင်းကိုမေ့လတ်သော် မြို မင်းကြီးကညီအိမ်ရှေ့မင်းကိုခေါ်၍ ဤသို့ဆိုတော်မူ၏။ငါတို့က ရှေ့ကောင်းမူကံကြောင်းသာလျှင်မရမာ မင်းအဖြစ်ရ၏ ။ငါတို့အမျိုးခုနှစ်ဆက်ကား တောင်ထက်တောထဲကြီး သား မြို ဖြစ်၏။အနွယ်ဖြစ်သော တောစောင့်တောင်စောင့်နတ်တို့သည် များစွာလာကုန်လျက် သံလှံတံတောင်လေးဖြင့်ခြိမ်းခြောက်လာ၍ ငါလန့်ဖျပ်ယောင်ယမ်းသတည်းဟုပြန်ပြောပေသော် စန္ဒာဒေဝီမိဖုရားနှင့် ညီအိမ်ရှေ့မင်းက ရှေးကျင်းရိုးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော်မုပါဟုဆိုပေသော် နွားနောက်၊ကျွဲဖြူ များစွာယူလျက် မြို တို့၏ ဝတ်မြဲဖြစ်သောကြိမ်နွယ် ကြွေပေါက်ဦးဖွဲ့ စသည်တို့ကိုဝတ်လျက် တောင့်လေးမြားကို ကိုင်၍ ညီအားကျွဲကြိုး၊နွားကြိုး ကိုင်စေ၍ ရှေးကသွားစေ၏။မြို မင်းကြီးကား တောင့်လေးမြား လွားကိုကိုင်လျက်
နောက်မှလိုက်လေ၍ တောင်တူရူသို့ထွက်လေလျှင် လဆုတ်ကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ညဥ့်သန်းခေါင်လွဲလျှင် လထွက်လတ်၍ တောင်တစ်ခုထက်၌ သစ်ပင်ပြိုင်းပြိုင်းကို မြင်လတံလျှင်
မိုးသောက်လုပြီတကားဟု ညီဖြစ်သော အိမ်ရှေးမင်းကို အဆိပ်လူးသောမြားဖြင့်ပစ်လေ၏။ယင်းသို့မြားဖြင့်ပစ်သောချောင်းငယ်ကို ငလျက်ခေါင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကုန်၏။မီုးသောက်လုပြီဖြစ်၍
သစ်ပင်ပြိုင်းပြိုင်းမြင်သောအရပ်ကို ပြိုင်းတောင်ဟုခေါ်ဝေါ်ကုန်၏။ညီအလောင်းကို ချောင်းငယ်ဖျား ဝယ်ဝှက်ဖုံး၍ထားခဲ့သည်ကိုဝှက်ဖုံးဟုယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။
ထို အမြတူမင်းကြီး ကား နန်းတော်သို့ပြန်လေ၍ ကျွဲဖြူ ငါ့ညီကိုခတ်၍ သေလေသည်ဟုငိုယိုမူပြု၏။အိမ်ရှေး အမြကူညီသား ပဲဖြူ လည်းအဖကို သတ်လေသည်ကိုသိ၍ ငိုကြွေး၍ နေလေ၏။ မြို မင်းကြီးက ငါမင်းဖြစ်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ငါ့ဆွေငါ့မျိုးတို့သည် မြို ရိုင်း၊ချင်းရိုင်းတို့နှင့် ရောစပ်ခြင်းမဖြစ်စေကောင်းဟုမီးချောင်းဝယ်ရှိသော အလုံးစုံသောမြို တို့ကို ခေါ်စေ၍
ဖိုးခေါင်တောင်ရိုး၌ တည်ထားလေ၏။ထိုအခါ အရှေးပုဂံပြည်ကို အစိုးရသောရှေွမှောက်အမည်ရှိသော ပျူ မင်းသည် စူဠစန္ဒရားမင်း ကို နဂါးနှစ်လေသောကြောင့်ဝေသာလီပြည်၌ မြို ညီနောင်သားဖ သုးံယောက် တိုသည် မင်းပြု ကြသည်ဟုကြားလေသော် အကြောင်းကိုသိ၍ ကိုးသောင်းသောပျူတို့နှင့် စစ်မက်ပြု အ့ံဟု ဖိုးခေါင်တောင်ကိုကျော်၍ ပြိုင်းတိုင်တောင်ခြေရင်းဝယ် ရောက်လာသော် မြို ပဲဖြူ မင်းသားသည် ထိုအကြောင်းကိုသိလေလျှင် ပျူ မင်းထံသို့ သွားလေ၍ ဤသို့လျှောက်ပေ၏။အကျန်ုပ်အဘကြီး မင်းသည်အကျုန်ုပ်အဖကို သတ်လေသောကြောင့် အကျန်ုပ်သည် အကျနု်ပ်၏ မြို ဘာသာဖြင့်ခေါင်းဖို့ဆပ်မည်ဟုအရှင်မင်းထံအကျန်ုပ်လာပါသည်။အကျန်ုပ်အလျှင်သတ်ပါမည်။ဤအဉ္စနနဒီမြစ်ကိုလည်း အကျနု်ပ်လျှင်ကူးတို့တင်ပါမည်ဟု လျှောက်လေသော် ပျ ူမင်းလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လေ၏။ပဲဖြူ မင်းသားသည် ဤသို့ဝန်ခံလျှောက်ထားပြီးလျှင် ရိုသေစွာနတ်တို့အား တိုင်တန်း၍ ဓိဌာန်သစ္စာပြုပေ၏။ငါသည် အကယ်၍ ဤပျူမင်းချီလာသော ရန်စစ်ကို ပယ်လှစ်ခွင်းဖျက်နိုင်မည်မှန်လျှင် ခုနှစ်ရက်ပတ်လုးံမှောင်အတိမိုက်စေသောဟုဓိဌာန်သစ္စာပြု လေလျှင် ကုသိုလ်ကြီးသော ဖြစ်၍နတ်တို့သည် မနေပိုင်သောကြောင့် လူသုးံကျိပ်
အယောင်ဖန်ဆင်းလျက် လှေလှော်ကားနှစ်စင်းတွင်တင်၍ ဓားလှံလက်နက် အစုံနှင့် ရောက်လာပေ၏။ခုနှစ်ရက်ပတ်လုးံလည်းမှောင်အတိမိုက်လေ၏။ပဲဖြူ မင်းသားသည် ထိုလှေလော်ကားဝယ်တင်၍ ကူတို့ပို့ဟန်အသွင်ဖြင့် တောင်ကြီးတစ်ခုသို့ ယူပြီးလျှင် ရဲမက်ဗိုလ်ပါများကို သတ်လေ၍ ခုနှစ်ရက်တိုငိလျှင်လင်းလေ၏။ကြွင်းသော ပျူရဲမက်ဗိုလ်ပါတို့သည်ပြိုင်တိုင်းတောင်ထက်သို့ တက်၍ ငါတို့ရဲမက်ဗိုလ်ပါ တို့သည်ကား ဘယ်အရပ်ဝယ် စုဆောင်းလေသနည်းဟု ကြည့်လတ်သော် တောင်ကြီးတစ်လုးံဝယ်ပျူတို့၏ အကောင်ကိုမြင်လေလျှင် ဤ မြို ကျွန်သားကား ဥပါယ်တံမျဉ်ဖြင့် ရဲမက်ဗိုလ်ပါများကို သတ်လေပြီဟု ကြောက်လန့်စွာ ဖြစ်လျက် ပြန်သွားကြလေကုန်၏။ထိုသို့ခိုးသတ်လေသည်ကို အကြောင်းပြု၍သတ်ခိုးတောင်ဟု တီင်လေ၏။ ယင်းသို်ပြန်သွားလေသော် ပျူမင်းနှင့် ရဲမက်ဗိုလ်ပါတို့ကိုမြို မင်းသားပဲဖြူ သည် လိုက်၍ တိုက်ခိုက်ရာဝယ် ဦးလည်ကို ဖြတ်ပြီးသော သဲစုကဲ့သို့စုထားရာအရပ်သည် ဝသဲအရပ်ဟု တွင်လေ၏။ ထိုပျူမင်းလည်းကြွင်းကျန်သောရဲမက်
ဗိုလ်ပါနှင့်တကွ ပြန်သွားလေ၏။ပျူ တို့တွင်ရလိုက်သော ရွှေငွေ တို့ကို စုသောတောင်တို့ကားရွှေတောင် ငွေတောင်ဟု တွင်လေ၏။ ထိုအခါပဲဖြူ မင်းသား၏ အဘ ကြီးဖြစ်သော အမြတူသည်ကား ပဲဖြူ မင်းသားသည် ဘုန်းတန်ခိုးလက်ရုးံမြောက်မြားသောအဖြစ်ကို သိလေလျှင်သင့်အဖကို ငါသတ်သော အငြိုးဖြင့် ငါ့ကိုခေါင့်ဖိုးဆပ်လတ္တ့ံသတည်းဟု ထိတ်လန့်ကြောက်ရွှံလျက် ထို မြို မင်းအမြတူ ကား အိမ်နိမ့်၄၀၊လေးဆယ်။နန်းစံ၇၊ခုနှစ်နှစ်။နှစ်စုသက်တော် ၄၇၊လေးဆယ့်ခုနှစ်နှစ်။သက္ကရာဇ် ၁၃၈ခုနှစ်တွင်သွေးအန်၍ လွန်တော်မူလေသည်။
စည်သဘင်အမတ်ကြီး မြို မင်းနှင့်သမီး ပန်းနီလာပြင်ဆင်
အမတ်စည်သဘင် (အာရကန် သက္ကရာဇ်၃၄၅-၃၄၇ ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးမှ သက္ကရာဇ်၉၈၂-၉၈၄ နန်းစံနှစ် (၂)နှစ် ခေတ္တသင်မင်းဆက်( ၁၅)ဆက်မှာပါဝင်သည့် အမတ်ကြီးစည်သဘင် မြို ပန်းနီလာ၏ ဖခင်ဖြစ်ဟန်ဖော်ပြသည်။စည်သဘင်အမတ်ကြီးအကြောင်းကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးသားခြင်းမတွေ့ သေးပေမယ့် သူ၏သမီးတော် ( မတိကျ)မင်းသမီး တစ်ဦးနှင့် မင်းသားပန်းတံမောင်သည် ဓညဝတီ ရခိုင်ပြည်ဘုရင်ဘုရင်သားတော်တစ်ပါး အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ဤကဲ့သို့ တွေ့ရှိရပါသည်။တိမ်မြူ ကင်းသော လမင်းသည် ကုလားတန်မြစ်ကို ငွေသင်ဖြူ းခင်း ပေးထားသည်။ကုလားတန်၏ လှိုင်းဂယက်တို့ကမူ ငွေသင်ဖြူ းအားလူးလွန်းလှုပ်ရှားစေလျက်ကမ်းပါးကို တဝေါဝေါရိုက်ခတ်စေ၏။တိတ်ဆိတ်သောည နှင့် ကုလားတန်၏ စည်းဝါးသံ။စာပေးစာယူ အနီးကပ်သင်တန်းပို့ချရန် စစ်
တွေမြို့သို့ ရောက်နေသော ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်စုသည် ကုလားတန်၏ အလှနှင့် ကုလားတန်၏ စည်းဝါးအာရုံခံနေကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ စာပေးစာယူ သင်တန်းသားအချို့လည်း ရှိနေကြပါသည်။ရုတ်ခြည်းပင် ကုလားတန်၏ စည်းဝါးနှင့်ညီညွတ်စွာ ရခိုင်တေးတစ်စသည် စာပေးစာယူသင်တန်းသားများထံမှမှုန်ပျပျမြစ်ယံသို့ ခုန်ထွက်လွင့်ပျံသွားပါသည်။
တေးသံရှင်မှာ မောင်တောမြို့ ကကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။တေးသွားမှာ ငြိမ့်ငြိမ့်အိအိရှိလှသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လည်း တေး၏ ဇစ်မြစ်နှင့် တေး၏သဘောကို စူးစမ်းကြပါသည်။
တေးမှာ မြုံ မင်းသမီး`ပန်းနီလာ´ကြင်ယာရှာထွက်သောအကြောင်းကိုဖွဲ့သီထားသောတေးဖြစ်ပါသည်။ ပန်းနီလာသည်`ပန်းတံမောင်နှင့် သံတွဲသူဘွဲ့ အဲး´ခေါ် ရခိုင်ရှေးဟောင်းကဗျာကြီးမှ ဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်၏။`ပန်းတံမောင်နှင့် သံတွဲသူဘွဲ့ အဲး´မှ သိရသောပန်းတံမောင်နှင့် ပန်းနီလာတို့၏ ဇာတ်လမ်းမှာဤသို့ပါတည်း။ပန်းတံမောင်သည် ဓညဝတီ ရခိုင်ပြည်
ဘုရင်၏သားတော်တစ်ပါးဖြစ်၏။ မင်းသားပန်းတံမောင်သည် ငယ်နုစဉ်ကပင် ဦးရီးတော်သံတွဲ မြို့စား၏ သမီးတော် လှဦးရံနှင့် လူငယ်တို့ဘာဝ မေတ္တာမျှဖူးကြသည်။သို့သော်မိဘများ
က ရက်မသင့်၍ ထိမ်းမြားမပေးနိုင်ဆိုကာခွဲထားခဲ့ကြသည်။နုနုငယ်ငယ်ကပင် အဆွေးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ခဲ့ရသောပန်းတံမင်းသားသည်မိမိ၏ငယ်ဆရာ ရွှေကျောင်းရှင်ဆရာတော်ဘုရား
သာသနာပြု ရန် ရည်းမြုံ ပြည်သို့ အကြွတွင်စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဆရာတော်ဘုရားနောက်တော်က ပါခဲ့လေသည်။မြုံ ပြည်တွင် ပန်းတံမောင် မြင်ရသမျှမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းချည်းဖြစ်
နေပေသည်။ဗဒရိခေါက်တင်၊ခါးတွင်ရစ်ပတ်၊ရည်းသူသားမှာ၊ဆောက်လုံဝတ်လို့ ။ ။ရည်းသူမကို၊ကြည့်စီငြားလည်း၊ထဘီပေါင်လတ်၊ရည်းသူရိုးမှာရင်မကန်လေ။ ။ရင်ပတ်ဟင်းလင်း၊ရည်းသူ
ရိုးမှာ၊နို့တင်းလင်းနှင့်။ ။ပန်းတံမောင်အဖို့ မြုံ ပြည်သူ မြုံ ပြည်သားတို့ ဝတ်ပုံစားပုံမှာ မျက်စိရှက်စရာပင်။ယောကျၤားများက ဗဒရီခေါ် နံငယ်ပုဆိုးရှည်လျားလျားကို ခါးတွင်လုံရုံမျှသာဝတ်ကြ၏။
မိန့်မများမှာမူ ပေါင်အလယ်ခန့်ရောက်သောထဘီတိုမှအပါး ဘာမျှမဝတ်ကြ။ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကိုယ်ခန္ဓာ၏ သဘာဝအလှကို ထုတ်ဖော်ဝင့်ကြွားနေကြသည့် နှယ်တည်း။သို့သော်
အထူးအဆန်းတို့သည် ခဏပန်းမျှသာ ပန်းတံမောင်အားစိတ်ဝင်စားစေခဲ့၏။အသည်းနှလုးံတွင်တငွေ့ငွေ့ကျွမ်းနေသော အလွမ်းမီးကတဒင်္ဂစိတ်ဝင်စားမူ ကိုဝါးမျို
ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။နှလုးံသားအလွမ်းမီးမှ အခိုးအငွေ့တို့သည်ပန်းတံမောင်၏ မျက်နှာအား ထာဝရရစ်သိုင်လွှမ်းခြုံထား၏။ညှိုးညိုှးလျလျနှင့်ပင် ပန်းတံမောင်မှာ မြုံ ဘုရင်နန်းတော်သို့ ဆရာသခင်
ဆွမ်းခံကြွတိုင်းသပိတ်ပိုက်၍ လိုက်ရှာ၏။မြုံ မင်းနန်းတော်သို့ ရောက်ပြန်တော့လည်းမင်းသားပန်းတံမှာ အ့ံဩရရှာပြန်သည်။တောင်တမျှကြီးမှားသော မြုံ ဘုရင်နန်းတော်ကား
အ့ံဖွယ်ရှိပေစွ။မြတံခါးရွက် အသွယ်သွယ်တပ်အပ်သော လေသွန်ပြတင်းများဖြင့် မြုံမင်းသခင်နန်းဆောင်များသည် တင့်တယ်ခန့်ညားလေစွ။အဝတ်အထည်အစားအသာကိုချိုငဲ့ခြိုးခြံ
စွာဝတ်ဆင်စားသောက်လည်းရှိကြသောမြုံပြည်သူတို့နှင့် မြုံ ဘုရင်နန်းတော်မှာမြေနှင့်မိုးပါတကား။မြေဆီ ဘဏ္ဌာတော်၊ရေဆီဘဏ္ဌတော်တို့ကိုအဆက်အသဝင်လာသော ခြူ သံတချွင်ချွင်နှင့် လှည်းတန်းရှည်ကြီးများကိုကြည့်ကာပန်းတံမောင်မှာအ့ံဩမိရှာသည်။မြုံမင်းကေသခင်၊အသျှင်တန်ခိုး၊မြုံပြည်ရပ်မှာ၊မိုးနှယ်ကြိုးရေ။ရေဆီဘဏ္ဌာတော်၊တစ်နှစ်စီမှာ၊လှည်းငါးရာ၊မြေဆီဘဏ္ဌာ၊တစ်နှစ်စီမှာ၊
လှည်းငါးရာ။ ။နဂါးထိုင်ရာ ငွေကျောက်ဖျာ။နဂါးထိုင်ရာ ရွှေကျောက်ဖျာ။ ။ဥးဒရာဇ် ကေစံပယ်၊မြံပြည်အရပ်မှာ၊ငွေပေါရေ။ဥဒရာဇ်ကေစံပယ်၊မြုံ ပြည်ရပ်မှာ၊ရွှေပေါ့ရေ။မြုံ မင်းသခင် စိုးစံတော်မူရာ ဥဒရာဇ်တိုင်းကား ချမ်းသာကြွယ်ဝပေစွ။မြုံ ဘုရင်ကိုးကွယ်သော နတ်နဂါးရုပ်တုကြီးများစံရာ ကျောက်ဖျားကြီးများသည်ပင် ငွေသားအတိ၊ရွှေသားအတိ။တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်၍မြင့်၍ တက်ခဲ့သော
ပန်းတံမင်းသား၏အံ့ဩခြင်းကိုသရဖူဆောင်းပေးလိုက်သူမှာကားမြုံဘုရင်မင်း၏တစ်ဦးတည်းသောသမီးတော်`ပန်းနီလာ´ပင်တည်း။ဂေါစရွတ်ရွှေဝါ၊ပန်းနီလာ၊မေပင်ဆောင်းကေ၊မိုးကြိုးဝါနှင့်။။နားမှာကြည့်လည်း၊စိန်ရှင်တစ်ဖက်၊မြတစ်ဖက်နှင့်။။လည်မှာကြည့်လည်း၊ပတ္တမြားသီး၊စိန်သီးတူကွ၊ပန်းနီလာမှာ၊ဂေါ်ဘယနှင့်။။ခါးမှာကြည့်လည်း၊မောက္ကာချည်ကေ၊ပိုးချည်ရောယှက်၊ပန်းနီလာ၊နှမေဝတ်ကေ၊ပိုးနှင်းဆီလေ။ ။ပြည်တန်နဝရတ်၊လက်သူကြွယ်မှာ၊ဆစ်ပြည့်ဝတ်လို့။ ။အကျၤ ီဗာဇူ၊ရုပ်မျိုးစုံရေ၊ ဥဒေါင်းကြိုးကြာ၊ကျီးတစ်ရာလေ၊ဟင်္သာဖိုမ၊မေ့ဗာဇူမှာ၊ရုပ်ပုံချလို့။ရွှေချည်တစ်ဘက်ကို ခေါင်းဝယ်ပေါင်း၍
စိန်ခြယ်မြနားတောင်းကို နားဝယ်ပန်၍၊စိန်ဂေါ်မုတ် ပတ္တမြားများ စီခြယ်သော ဘယက်လည်ရွဲကို လည်ဝယ်ဆွဲ၍၊နှင်းဆီရောင်ပိုးချည်ဖြင့် ရက်သော ပိုးထဘီ၊ဦးဒေါင်းကြိုးကြာ ကျေးတစ်ရာရုပ်တို့ဖြင့် တင့်တယိလှသော အကျၤ ီတို့ကို ဝတ်ဆင်၍ ဆွမ်းလောင်းထွက်ခဲ့သောမြုံမင်းသမီး ပန်းနီလာ၏ ချောမွေ့သော ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည် ပန်းတံမောင်နှလုးံသားမှ အလွမ်းမီးခဲကို ထူထဲသောပြာဖြင့် ဖုးံပေးလိုက်သည်သို့။ပန်းတံမောင်သည် ခဏတာမျှငေးမောစူးစိုက်မိသည်။ ပန်းနီလာမှာလည်း လူသားမကား နတ်တမျှဟု သူ့စိတ်ဝယ်ထင်မိသော ပန်းတံမောင်၏ ရူပါရုံတွင် နစ်မွန်းနေမိ
ရှာသည်။ပန်းတံမောင်ခေါ် လုလင်သည် ချောပေစွ၊ခန့်ပေစွ။သို့ပါသော်ငြား သူ့မျက်နှာကလေးကားညိုှးနွမ်းလျလျ ချေသည်သကား။ဩော်သနားဖွယ်။မြုံ ဘုရင်၏ တစ်ဦးတည်းသောသမီး
တော်ပီပီ ပန်းနီလာသည် စိန်မာန်ထက်သူကလေးဖြစ်၏။ထက်မြတ်သောစိတ်ထားကို မြို လူမျိုးတို့၏ သဘာဝကနှိုးဆွလိုက်ရကား ပန်းနီလာသည် ပန်းတံလုလင်အားစတင်၍ စကား
ဆိုတော့သည်။ ပန်းတံမောင်လေး......လုလင်နွဲ့နှောင်း၊စိတ်ညိုးှညှိုးနှင့်၊မနေကောင်း။မောင်ပင်နွဲနွဲ့၊ကိုယ့်ပြည်ရွာကို၊စိတ်မှာလွမ်းဗျာ၊မညိုှးကေ့။ ။မေရို့နေမှတ်၊ဗွေပြာသာဒ်မှာ၊လည်လတ်ပါလေ။
ပန်းနီလာ၏ ဖိတိခေါ်ချက်အရ ပန်းတံမောင်သည် မင်းသမီးစံနန်းသို့ ဝင်ထွက်လာ်ပတ်ခွင့်ရခဲ့၏။ပန်းနီရာ စံရာ နန်းသည်လည်း အ့ံဩစရာပင်။ဖွေးလွသောကော်ဇောများ၊ဖိတ်လတ်
သောနှီးကြောဖျာများကို သူ့နေရာနှင့်သူခင်းထား၏။မိုး၊ဆောင်း၊နွေခါ ရာသီအလိုက်စံမြန်းမည့်တိုက်ခန်းဆောင်များကလည်း မွေ့လျော်စရာ။ပန်းနီလာသည် ဧည့်သည်လုလင်အား
စောင်းတီးလျက်၊တေးဆိုလျက်ဧည့်ခံ၏။ပန်းနီလာသည် ဆည်းလည်းသံ ညှင်းသံထွက်အောင် အသံငယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊နဂိုစောင်းသံစည်သံထွက်အောင်အသံလတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊မိုးကြိုးသံ ရေလှိုင်းသံထွက်အောင် အသံကြီးဖြင့်လည်းကောင်း စောင်းကိုကျင်လည်စွာတီးခတ်၏။စောင်းအသံကေ၊စည်သံရောငင်၊မြို မရိုးမှာ၊သံလတ်တင်ရေ။ဆည်းလည်းသံ၊ညင်းသံရောရု၊သံငယ်ကိုပင်၊
ခြင်းမျိုးပြု လို့။ မိုးကြိုးသံကေ၊လှိုင်းသံရောယှက်၊မြို မင်းစောင်းမှာ ၊သံကြီးထွက်တေ။မိုးအသံကေ၊လေသံရောဝင်၊သံကောင်းငင်လို့၊မြုံမသံချိုမောင်တည့်ရာသူကို၊စောင်းခြင်းငင်ဖျာ၊
ချစ်ကြောင်းဆိုရေ။မြို မင်းသီး၏ စောင်းသံနှင့်မေတ္တာဘွဲ့တို့သည် ပန်းတံလုလင်၏ အသိစိတ်အတွင်းမှ လှဦးရံကို လိုးဝမောင်းနှင်ထုတ်လိုက်ရုံမက
အစွမ်းကားထက်မြက်ပါဘိတောင်း။ပန်းတံမောင်သည် ပန်းနီလာ၏ နန်းပြာသာဒ်သို့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက့်လည်အပတ်ရောက်ခဲ့၏။ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းလည်းပန်းနီလာ၏
သန်မာသောညို့ှဓာတ်ပင့်ကူနွယ်တွင်ရုန်းမလွတ်သောပိုးကောင်ငယ်ဖြစ်ရ၏။သို့သော်ပန်းနီလာ၏နန်းပြာသာဒ်သို့မရောက်သောအချိန်များတွင်ကား လှဦးရံသည်သာ ပန်းတံမင်းသား၏ နှလုးံသားဧကရီဖြစ်ပါ၏။ထို့ကြောင်းလည်းရည်းမြုံ ပြည်တွင်သုးံနှစ်တာမျှကြာသောအချိန်တွင် ဆရာသခင် ရွှေကျောင်းရှင်အားဓညဝတီသို့ပြန်ရန်လျှောက်ထားလေတော့သည်။
လားကြမေဖျာ၊မြတ်ဆရာလေ။ ။မျက်ခမ်းမှာ၊မျက်ရည်ပြစ်ပြစ်။ ပန်းတံမောင်မှာ၊ရင်လုးံနစ်တေ။ဖျားလို့ကြုံ ကေ၊ညိုးသူကိုယ်လတ်၊ပန်းတံမောင်မှာ၊ကိုယ်မပျက်။ ။မေ့ကိုတမ်းလို့ လွမ်းစတာရှည်၊လျလျကြုံကေ ၊လူသိရေ။ပန်းတံသား၊မောင်ချစ်ကိုယ်တွင်၊စိတ်ပူပင်ကေလူမသိနိုး၊အထဲကြေကေ၊ဝေလို့ညိုးရေ။တပည့်ချစ်အပေါ်တွင် ကရုဏာကြီးလှသောဆရာတော်ဘုရားမှာ မိမိကိစ္စကိုဆိုင်းင့ံ၍ဓညဝတီ သို့ပြန်ခဲ့ရတော့၏။မြုံ ဘုရင်သည် ပန်းတံမောင်တို့ ဆရာတပည့်အား မြုံ ပြည်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်ဖိုးခေါင်တောင်အထိ အခမ်းအနားနှင့်လိုက်ပိုးပေး၏။
တစ်ပြည်သားကို မေတ္တာပွားမိခဲ့သောပန်းနီလာမှာကား ပန်းတံမောင်၏ မိဘပြည်ရွာသို့ခေတ္တပြန်စေကြောင်းခွန့်ပန်တောင်းချက်များကိုမငြင်းပယ်သာဘဲ၊ပန်းတံမောင်တို့ပြန်သည့်
နေက`တန်းကိုလက်ကိုင်၊တနားမှိုင်၊တိုင်ကိုလက်ဆွဲ၊တနားနွဲှလို့၊နွှဲလျော်ခေါက်တက်´ဝမ်းနည်းပက်လက်ကျန်ခဲ့ရှာလေသည်။နေပြည်တော်သို့ပြန်ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ပန်းတံမောင်သည် ချစ်ဦးသူလှဦးရံထံအမြန်ပြေးကာရှေးရေးကိုဆွေးနွေး၏။ပန်းတံမောင်၏ သဘောမှာ`တနင်္ဂနွေ၊စနေ ရန်ဘက်မေနှင့် မောင်သည် ရက်မသင့်၊ရက်သားမဆိုင်၊မေနှင့်မောင်ကိုမပေးနိုင်´ဟု စွဲစွဲမြဲမြဲအယုသည်းနေသော မိဘ၏ပြည်ရွာတွင်ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ပေါင်းခွင့်ပြု မည်မဟုတ်၍မိမိကျင်လည်ခဲ့ရာ မြုံ ပြည်ရွာသို့သွားကာချစ်သူနှင့်အတူ ဇာတ်မြှုပ်ချင်၏။လှဦးရံကမူ
ဆွေမျိုးသားချင်းများဝေးရာသို့ မသွားလိုဘဲကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာတွင်သာ ဖြစ်သည့်နည်းနှင့်ပေါင်းရအောင်ကြံဆောင်လို၏။နောက်ဆုးံတွင်ပန်းတံမောင်က ဆံထုးံ
ထုးံတတ်၊ပန်းကုံးတတ်၊မှတ်တတ်ကပင်၊ငယ်ကကြင်ရေ၊ငယ်ခါပျံပျူး၊ငယ်ကချစ်ကေ၊ခင်ပွန်းဦးလေး....။မြုံ မင်းသမီး၊အထွီးကြင်ရာ၊ပန်းနီလာနှင့် မောင်လည်းသာခြေ။ပန်းသစ္စာကို၊ထားခရေ၊
မေမလိုက်လည်း၊မောင်တည်းရာသူမှာ၊ပန်းသစ္စာကို၊ဖြေခိမေ....။ဟု သွေးတိုးစမ်းလိုက်၏။လှဦးရံသည် မိမိမှတစ်ပါးတခြားမိန့်မပျို တစ်ဦး၏အမည်ကို ချစ်သူ၏ နုတ်ဖျားမှ ကြားလိုက်ရ
သောအခါ အသည်းတဆတ်ဆတ်ခါသွား၏။ထို့ကြောင့် ချက်ချင်းပင် `မိကိုကွင်းကေ၊လင်ရင်းတလည်း၊ဖြစ်တတ်တေ၊ငယ်ကကြင်လေ၊အသျှင်ဆောင်ရာ၊ရည်းမြုံ ပြည်မှာ
၊နောက်ကပါမေ.........´သဘောတူလိုက်ရတော့၏။လှဦးရံ၊ပန်းတံမောင်နှင့် ပန်းတံ၏ ညီတော်ပန်းရွှေမောင်တို့သည် သီတာ၊ရာမလက္ခဏာတို့ကဲ့သို့ ဓညဝတီပြည်ကြီးမှခွာ၍
တောအထပ်ထပ်တောင်အထပ်ထပ်ကိုကျော်ဖြတ်၍ မြုံပြည်သို့ ရှေးရှုလာကြခဲ့ရာ နယ်ခြားဖြစ်သော ဖို့ခေါင်တောင်သို့ ရောက်ခဲ့ကြ၏။ဖိုးခေါင်တောင်ကား အနောက်ပြည်၊ရှမ်းပြည်
၊မြုံပြည်တို့သို့သွားသောလမ်းလေးလမ်းဆုံရာပြည်ခြားတောင်ဖြစ်၏။သရက်၊ကညင်၊လွန်ပင်၊ညောင်ပင်၊စသောသစ်ကြီးဝါးကြီးပိတ်ဆီးယှက်မိုးသောတောင်ကြီးတည်း။ဖိုးခေါင်တောင်၏ဝါးတာများမှာလည်းအရှေးဝါးကအရှေ့ကု်ညွန်းလျက် အနောက်ဝါးကားအနောက်ကိုညွန်းလျက်သွတ်သွတ်သုန်သုန်တိုက်ခိုက်နေသော လေကလည်းမပြတ် ဥဒဟို။ထိုဖိုးခေါင်တောင်မြင့်ပေါ်သို့ လှဦးရံနှင့် ပန်းတံညီနောင်တို့သည်ခရုပတ်ခွေဆစ်၍ လင်္ကျာရစ်တက်ခဲ့ကြရာ စည်မျက်နှာကဲ့သို့ ညီညာသောတောင်ထိသို့ ရောက်ခဲ့ကြလေ၏။ ဖိုးခေါင်တောင်ရောက် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပန်းဟိုက်၍တစ်ထွေ၊နေပြည်တော်နှင့် မိဘသားချင်းတို့ကို
လွမ်းတ၍ တစ်ဝလှဦးရံခများငိုခဲ့ရသည်မှာလည်း အဖန်ဖန်။ပန်းတံမင်းသားမှာလည်းချစ်ဦးသူ အလွမ်းပြယ်လျော့အောင် ချော့မောခဲ့ရသည်က မကြာခဏ။လေကြီး မိုးကြီးကျ၍ ဒုက္ခနှင့် ကြုံသည်မှာလည်းတစ်လီနှစ်လီ၊ထို့ကြောင်းပင် မှိုင်းရီမြင့်သော ဖိုးခေါင်တောင်တွင်မင်းသုးံဖော်တို့သည် အချိန်အတော်ကြာမျှစတည်းချရလေတော့၏။ခရီးရိက္ခာစာလည်းပြတ်လုလုဖြစ်ခဲ့ပြီ ။ပန်းတံမင်းသားလည်းမြိုပြည်အစွန်အဖျားသို့ ရိက္ခာသွားရှာရန် ခုနှစ်ရက်မျှ ခွင့်ပေးမည့်အကြောင်းလှဦးရံထံအတန်တန်ခွင့်တောင်းပြီး ထွက်ခဲ့၏။ယင်းနေတွင်ပင်ပန်းနီလာသည် ထူးဆန်းသော အိမ်မက်သုးံခုကိုမြင်မက်လေသည်။တစ်မက်မူကား၊အရှေ့တလွှား၊ကျီးသားညို ပြာ၊ပျံလို့လာရေ။ကျီးညို ထဲမှာ၊ကျီးဖြူ တစ်ကောင်၊ပါမက်တေ။တစ်မက်မူကား၊ဗြောင်းဖြူ ဆယ်
တောင်၊ပိုးမုံရောင်၊ငါးတောင်ခေါင်းမှာပေါင်းမက်တေ၊ငါးတောင်ျမြမှာလုမက်တေ။ဤ အိမ်မက်သုးံခုအကြောင်းကို ပန်းနီလာသည် ခမည်းတော်ထံပြေး၍ အထိတ်တလန့်မေ့ရှာ၏။သမီးတော်၌ ကြင်ဘတ်သက်လျာ ဆုံစည်းလာမည့်နိမိတ်ဖြစ်မှန်းကို မြုံ ဘုရင်သိတော်မူသည့်အတိုင်း မိမိတည်ထောင်ပေးထားသော ဈေးသုးံ ဈေးသို့ လှည့်လည်၍စိတ်တူကိုယ်မျှ သဘောကျသူကိုရှာခဲ့ရန်သမီး
တော်အားညွန်ကြားလိုက်၏။ပန်းနီလာလည်းမဆိုင်းမတွပင် စီးတော်လှည်းယာဉ်ကြီးဆင်စေပြီး မူးတော်မတ်တော်များဖြစ်သော မြဒါနား၊စိန်ဒါနားတို့ ှဦးဆောင်သည့် ဗိုလ်ခြေတစ်သောင်းအခြံအခြံဖြင့် ကြင်ရာရှာထွက်ခဲ့လေသည်။ တစ်ဘက်ငါးဆယ်၊မြီးများသွယ်သို့၊တရာပင်းတွန်း၊ဗိုလ်တစ်သောင်းနှင့်ပန်းနီလာကား၊ရုံဒေဈေးမှာ၊လင်ရှာလားရေ။စစ်ခရောသံနှင့် အမြောက်သံတညံညံ၊လှေတော်သံနှင့် စောင်းသံတငြိမ်း့ငြိမ်းဖြင့်မင်းသမီးပန်းနီလာ၏ စီးတော်လှည်းသည်ရုံဒေဈေးထိပ်သို့ရောက်လာ၏။ထိုအချိန်တွင် မင်းသားပန်းတံလည်း ဇော်ဂျီရုပ်ဟန်ဖြင့်ရုံဒေဈေးတွင်ရိက္ခာ
စုရန်ရောက်လျက်ရှိလေသည်။မင်းသားကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလုပ်ထားသော်လည်းပန်းနီလာ၏ စီးတော်ဆင်နှင့် အချစ်တော်ရွှေဥဒေါင်းတို့က မင်းသားကိုမှတ်မိကြ၏။ထို့ကြောင့်မင်းသားမှာ ပန်းနီလာ၏ အတင်းအကြပ်ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံရလေသည်။ပန်းတံမောင်က မိမိတွင် ချစ်ဦးသူ လှဦးရံရှိကြောင်း၊ယခုဖိုးခေါင်တောင်စခန်း၌ကျန်ခဲ့ကြောင်းမည်မျှပင် ပြောသော်လည်း ပန်းနီလာ
ကားပန်းတံမောင်ကို လက်မလွတ်တော့ပြီ။လှဦးရံနှင့်စေ့စပ်ဖြေရှင်းရန် ပန်းတံမောင်ကိုစီးတော်လှေတွင်တင်၍ ဖိုးခေါင်တောင်စခန်းသို့ပန်းနီလာချီခဲ့၏။လှဦးရံနှင့် ပန်းနီလာတို့ ဖို့ခေါင်တောင်စခန်းတွင် ဆုံကြပုံကား အသည်းတလှပ်လှပ်ရင်တဖိုဖို ဖြစ်စရာပင်တေး။ဖိုးခေါင်တောင်လှဦးရံ၏စခန်းချရာ တစ်ဖက်၌ ပန်းနီလာက စခန်းချထား၏။အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းလှဦးရံက
စစ်ကူခေါ်သဖြင့်ရောက်လာသော မတ်တော်မောင် ပန်းစိန်ဖြူ ကစခန်းချထား၏။ညို့ှခွန်အားရှင်ပန်နီလာသည် သစ္စာရှင်လှဦးရံအား ပန်းတံမောင်ကို လောင်းကြေးပြု ၍ သူနှင့် လောင်းက
စားစေလေ၏။လှဦးရံရုးံှ၍ ပန်းနီလာပြုံးရယ်ရလေသည်။နုတ်ကတိထားခဲ့သည့်အတိုင်းစစ်ရေးဖြင့် ဖြေရှင်းခွင့်မရှိ။ ထိုသို့ဖြေရှင်းရန်လည်းမလိုလားခဲ့သော လှဦးရံသည်
ကြင်ဘက်တော်အားပရိယာယ်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်မတ်တော်မောင်ပန်းစိန်ဖြူ အားအကူအညီတောင်းရှာ၏။ပန်းစိန်ဖြူလည်း ပန်းနီလာ၏ စခန်းသို့စေ့စမ်ဆွေးနွေးရန် လာခဲ့လေတော့သည်။
မင်းသားပန်းစိန်ဖြူ နှင့် ပန်းနီလာတို့အတွေ့၌လှဦးရံဆုတောင်းပြည့်လေတော့၏။အကြောင်းကား ဤသို့တည်း။ဤဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအသွယ်သွယ်တွင် မြို ,Mro ,Murong မြုံ ,Mru မြူ စကားလုံးသည် ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင်လည်း မြို လူမျိုးတို့ကို နေရာဒေသအလိုက် ခေါ်ဝေါမူရှိပါသည်။
၁.https://www.dropbox.com/sh/3640chcjjwa9xqd/AABa4ISwaf3sHt3EtQ1GlUGQa?dl=0&fbclid=IwAR0L31MId_koG8j7MjTtsPwHdHHcEokiAapLsn5WDFw_e5u_d6-wh3C2Qdg&preview=%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%9E%E1%80%B6+(%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%96%E1%81%9A)-1.pdf ရိုးမခေါ်သံ- မောင်စံဖော် စာအုပ်။
၂.https://www.dropbox.com/sh/3640chcjjwa9xqd/AABa4ISwaf3sHt3EtQ1GlUGQa?dl=0&fbclid=IwAR0L31MId_koG8j7MjTtsPwHdHHcEokiAapLsn5WDFw_e5u_d6-wh3C2Qdg&preview=%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A7%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+(%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9)+%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A7%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+(+%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%AD%E1%80%87%E1%81%A8%E1%80%AC).pdfရခိုင်မင်းသမီးဧခြင်း(သို့မဟုတ်)မောက်တော်ေဧးခြင်း စာ - ၃၆၊ ၃၈ အပိုဒ်(၁၄)
3.https://www.dropbox.com/sh/3640chcjjwa9xqd/AABa4ISwaf3sHt3EtQ1GlUGQa?dl=0&fbclid=IwAR0L31MId_koG8j7MjTtsPwHdHHcEokiAapLsn5WDFw_e5u_d6-wh3C2Qdg&preview=%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%87%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း(ပ,ဒု ရမ်းဗြဲမြို့ တောင်ကျောင်းဆရာတော် စန္ဓမလာလင်္ကာရ။
၄.https://www.dropbox.com/sh/3640chcjjwa9xqd/AABa4ISwaf3sHt3EtQ1GlUGQa?dl=0&fbclid=IwAR0L31MId_koG8j7MjTtsPwHdHHcEokiAapLsn5WDFw_e5u_d6-wh3C2Qdg&preview=%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC+%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%8F%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%87%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9.pdf ပီပြင်သော ရခိုင်ဘုရင်များ၏ ရာဇဝင် စာ-၇၊ (ကု-ရင်) ၊ (ကူ-ကြော)၊ စာ-၁၀ (ကေ-ရင်)။
၅.https://www.dropbox.com/sh/3640chcjjwa9xqd/AABa4ISwaf3sHt3EtQ1GlUGQa?dl=0&fbclid=IwAR0L31MId_koG8j7MjTtsPwHdHHcEokiAapLsn5WDFw_e5u_d6-wh3C2Qdg&preview=%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8_6.pdf ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများအမှတ် (၆)။
၂။ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း(ပ,ဒု ရမ်းဗြဲမြို့ တောင်ကျောင်းဆရာတော် စန္ဓမလာလင်္ကာရ
၄။ရခိုင်မင်းသမီးဧခြင်း(သို့မဟုတ်)မောက်တော်ေဧးခြင်း စာ - ၃၆၊ ၃၈ အပိုဒ်(၁၄)
၅။သျှင်သာရခိုင်ဆောင်းပါးများအမှတ် (၂) (ကထိက ဦးကျော်ရင်...သံတွဲ) စာ -၇၆
၆။ပီပြင်သော ရခိုင်ဘုရင်များ၏ ရာဇဝင် စာ-၇၊ (ကု-ရင်) ၊ (ကူ-ကြော)၊ စာ-၁၀ (ကေ-ရင်)
၇။ရခိုင်သုတ(ရခိုင်မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးများ) စာ -၈၄၊၈၅
၉။ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း-အဒူမင်းညို စာ-၁၁ အပိုဒ်(၁၂)
၁၁။ဓညဝတီရာဇဝင်သစ် (မင်းကျောင်းဆရာတော် ဦးပဏိ္ဌ)
၁၂။ဓညဝတီမြို့၏ နိဂုဏ်းရွာများသမိုင်းလင်္ကာ+ကျောက်ရစ်ကေဆရာ ဦးမောင်စံလှ
၁၃။"MRO"-CHA "-A HUB FOR MRU INDIGENOUS PEOPLEpromoting The "Mru",Retaining Their Ethnicity .page(24)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြိုမင်းဆက်&oldid=527740" မှ ရယူရန်
၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။